Tue, Apr 24, 2018 | 21:39:45 NST
चुनाव आयो भन्दा भन्दै हाल्देकै हो भोट । भोटका भारी बोक्नेहरुले टल्काइहाले कोट ।।
बलही गाविसका सबै गाविसमा ४ वर्षअघि नै विजुली पुगेको हो । तर त्यही गाविसका दलितका घर अझै अँध्यारै छन । के दलित भएकैले विभेद भएको हो ?
परिक्षण मोची, सिरहा बलही ९
नेताज्यू तपाईंहरुले भन्दा नागरिकले पहिल्यै थाहा पाइसके माघ ८ गते संविधान आउँदैन भनेर । त्यसैले अझै पनि संविधान आउँछ भन्दै हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
डिएन राई, भोजपुर पात्लेपानी
सभासद, शिक्षक, निजामति कर्मचारीसंगै प्रधामन्त्रीका स्वकिय सचिवले पनि कर तिरेनन भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । के अख्तियारले कर नतिर्ने सरकारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्दैन ?
रामबहादुर राई, उदयपुर, जालपा चिलाउने
सरकारले नागरिकलाई राहत दिन भन्दै घटाएको १ प्रतिशत भाडाले केही राहत हुँदैन त्यसै घटाउनुको साटो बढाए हुन्छ ।
मोहन दर्लामी,पाल्पा फोक्सिङकोट
बलात्कारीलाई कारवाही गर्न त अहिलेको कानुन भन्दा पनि कडा कानुन बनाउनुपर्छ अनि मात्र यस्ता घटनामा कमि आउँछ ।
जयकुमार ढकाल, पाँचथर
नगरपालिकामा नयाँ अधिकृत आइपुग्ने वित्तिकै गरिएको परिचयात्मक कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको मान्छे होइन रैछ हामी किन जानुपर्‍यो भनेको सुन्दा दुःख लाग्यो । के अधिकृत नागरिकका लागि होइन पार्टीको लागि मात्रै हो त ?
कुलप्रसाद धिताल कञ्चनपुर, पुनर्वास नगरपालिका
सार्क सम्मेलनका लागि रोपिएका विरुवा त जोगाउन नसक्ने सरकारले सार्क सम्मेलनका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ला ।
इन्द्र केसी – रोल्पा, मिजिङका
बाराको गढीमाईमा हजारौं पशुको बली दिने विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । केहीले त अदालतको ढोका पनि ढक ढक्याइरहेका छन । तर यहाँ दिनहुँ लाखौं पशुपन्छीको काटमार भइरहेको छ । यसलाई चैं कसले ख्याल गर्ने ।
खिम क्षेत्री, गुल्मी, शान्तिपुर
सरकारले सार्कका लागि गरेको काम त हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो । सम्मेलनपछि पनि सरकारले अहिलेकै जस्तो सफाइ र स्याहार गर्‍यो भने मात्रै सरकारको प्रशंसा गरौंला ।
राजु राजेश चौधरी, वर्दिया, बग्नाहा
सार्वजनिक गाडीमा प्रहरीले जाँच तिव्र पारेपछि विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई हैरान भयो । प्रहरीले भित्री बाटोमा गाडी चल्न नदिएपछि विद्यार्थी स्कूल पनि जान पाएनन । त्यसैले कि त प्रहरीले मुल बाटोसम्म निस्कने गाडीको व्यवस्था गर्नप¥यो कि अरु विकल्प भए त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । जाँचको नाममा नागरिकलाई दुःख दिनुभएन ।
रेखा बञ्जाडे, बुटवल
सहमति, सहमति सहमति । संधै सहमतिकै रटान लगाएर नेताले गर्न खोजेको चैं के हो ।
सागर राई, बाहुनडाँगी - झापा
सरकारमा रहेका दलहरु भन्छन् एमाओवादी लगायतका दलहरु नआए पनि संविधान बन्छ । एमाओवादी सहितका दल भने त्यसो गरे विद्रोह गर्छौं भन्छन् । यसरी विवाद गर्न भन्दा त साँच्चै नै नागरिकको हित चाहने हो भने दलगत स्वार्थलाई एकातिर पन्छाएर संविधानका विषयमा सहमति गरे हुने नी ।
कुमार सुब्बा, मोरङ
हैन अझै पनि सहमतिको नाममा देशलाई कता लैजाने हो र ? सहमति गर्न नसक्ने तर सहमति गर्छौं र सहमति नै हुनुपर्छ भनेर देशलाई बन्धक बनाई रहन त भएन नी ।
डिआर विष्ट, कालिकोट
निर्लज नेताहरुलाई नागरिकको दुखले केहि फरक पर्दैन । आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट खर्च गर्नु परे पो मोह लाग्थ्यो । वार्ताका नाममा देशको ढुकुटी सिध्याउँछन् सहमति भने गर्दैनन् । यस्तै हो भने नागरिकले अब सबै नेतालाई बहिष्कार गर्नु पर्छ ।
भगवती यादव, सप्तरी
अहिले सडक दुर्घटनाले महामारीको रुप लिएको छ । बाटो हिंड्दा पनि आङ नै सिरिङ हुन्छ कतै दुर्घटनामा परि हालिन्छ कि भनेर । जनसंख्या र यातायातका साधन बढेका बढेई छन् । बाटो भने उहि पुरानो संरचनाको भएकाले दुर्घटना बढेको होला यसतर्फ सबैको ध्यान गए हुन्थ्यो ।
एस महतो, धनुषा
संघीयतामा जाँदा स्वार्थ नराखि जाने हो भने नेपाललाई तीन प्रदेश बनाए पुग्छ । सगरमाथा, लुम्विनी र कर्णाली नामाकरण गरे सबैलाई राम्रै हन्छ । आखिर सबैलाई चाहिएको नेपालको पहिचान त होला ।
विएन शर्मा, भैरहवा
नेपालको तीन ठूला दलले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कुरामा मलाई चाहिं पटक्कै विश्वास छैन । संविधान बनाउन गएका जिम्मेवार नेताहरुले नै संविधान बन्नेमा शंका भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि हामी जस्तो सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने ठाउँ नै कहाँ रह्यो र ?
भोजपुर, बीरेन्द्र राई
नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगाउन पनि दलका नेताले समयमै संविधान बनाउनुपर्छ । नभए संविधान बनाउँछु भनेर खाएको सपथ पनि पुरा हुनेछैन ।
सन्तोष ताडी, डोटी
संविधान जारी गर्ने मिति जति नजिकिँदैछ सभासदहरु आफनो काम छोडेर विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन । अहिले समय हुञ्जेल चैं अरु नै कुरामा भुल्लिने अनि समय सकिएपछि म्याद थप्नुपर्छ भन्ने । यही ताल हो भने संविधान बनाउने कुरा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो ।